Muwaadin Somaliyed oo lagu dilay dalka Mareykanka – STAR FM SOMALIA
Ramadaan Maxamed oo u dhashay Somaliya ayaa lagu dilay Magaalada Pittsburgh Gobolka Pennsylvania ,Ragga dilka geystay oo afar ah ayaa waxa ay Madaxda magaaladaas sheegayaan in ay doonayeen Ramadaan oo taksiile ahaa in ay dhacaan.
Ragga la xiray oo lagu kala magacaabo King Edwards , Hosea Moore,Daniel Russell iyo Christen Glenn,ayaa loo qabtay falkaas,waxaana loo haystaa in ay dilkaas ka dambeeyeen.
Raggan waxa ay doonayeen in ay Darawalka Taksiilaha Somaliga ah ay ka dhacaan lacag uu watay,waxaana uu isku dhajiyay lacagtii halkaas oo uu ka dhashay dilka sida uu sheegay Guddoomiyaha Magaalada Pittsburgh , Bruce Kraus,waxaana uu macno darro ku tilmaamay dilka loo geystay Ramadaan.
Ramadaan Maxamed waxaa uu ka tagay xaas uur 8 Bilood ah leh iyo hal cunug,kuwaas oo ku nool Dalka Kenya, Booliska waxa ay shegeen inay wadaan Baritaan.
Dilkaan loo geystay muwaadinka Somaliyed, ayaa waxaa ay cabsi ku abuurtay dadka Somalida ah ee Takaasida ku wada dalka Mareykanka.
Kooxo Burcad Mareykan ah ayaa inta badan dilal qorsheysan waxa ay u geystan dadka Ajaanibta ah ee dalkaasi ku sugan oo ay Somalida ka mid tahay.
Dhowr mar sidan oo kale dad Somali ah ayaa loogu dilay gudaha dalka Mareykanka, Booliska ayaana dad kala duwan u soo qabtay.
Diyaarado aan la aqoon dalka laga lahaa oo duqeyn ka geystay duleedka Kismaayo